महिला विवाह गर्ने एक घोडा: घनिष्ठ फोटो को बीच प्रेम एक महिला र एक घोडा
बालिका प्रेम घोडाहरू, केटाहरू खेल फुटबल, नियम, कम्पनी धारण र, पप सांस्कृतिक चित्रहरु दशकहरूमा लागि, यदि छैन भने पनि शताब्दीयौं लागि, लगातार । फोटोग्राफर विल्मा हुर्रिकानेस एक बच्चा रूपमा को एक थियो»ती घोडा बालिका’, दृष्टिकोण को विषय महिला र घोडाहरू रूपमा एक वयस्क तर स्पष्ट छ । महिला विवाह गर्ने एक घोडा छ आफ्नो पनि अब एक पुस्तक प्रकाशित एक फोटो श्रृंखला को मा प्रकाश शेड जादुई बीच जडान मानिस र घोडा र विभिन्न पक्ष को एक मित्रता पड़ताल, सधैं त्यहाँ छ एक अधिक शक्तिशाली आधारित, गहिरो आदर, प्रत्येक अन्य । हामी वर्षीया, जसको तस्वीर पहिले नै युरोप र एशिया मा जारी थिए, बारे आकर्षण को पशु, साना, र लगभग को मामला सम्बन्धको बारेमा एक महिला र एक घोडा बताउनुभयो । के तपाईं लाग्छ छ फरक बीचको सम्बन्ध मा, महिला र घोडाहरू र पुरुष र घोडाहरू छन् । म निश्चित छु कि त्यहाँ हुनुपर्छ, बिल्कुल एक ठूलो फरक छ । पुरुष र महिला दुवै निर्माण गर्न सक्छन् एक धेरै घनिष्ठ बन्धन संग एक घोडा छ । एक हात मा, त्यहाँ छ, यो प्रतिष्ठित छवि को लोन चरवाहे, जसको एक मात्र वफादार सहकर्मी, आफ्नो घोडा छ । अर्कोतर्फ, उदाहरणका लागि, त्यहाँ छन् धेरै जवान बालिका जसले विश्वास मा एक निश्चित उमेर, कि जो केवल एक बुझ्नुहुन्छ तपाईं, तपाईंको प्रिय टट्टू छ । म हुर्क्यो संग तीन साना बहिनीहरू र म फोटो खिंचवाने किन कि सधैं बालिका र महिला, र को मामला मा, यो परियोजना यी महिला शेयर आफ्नो विचित्र संसार संग यी अन्य जीव । कसरी गरे परियोजना आउन बारेमा छ । तपाईं एक व्यक्तिगत जडान गर्न विषय छ । धेरै धेरै बाल्यकाल बिताएका त्यहाँ इच्छा त्यहाँ छ । सपना देख्यो को एक बच्चा रूपमा, जाने सवारी सक्छ, तर यो छ । एक वयस्क रूपमा, म लिएको छु पाठ र खुसी थियो. म गर्न सुरु गर्नुभयो, मलाई बनाउन कसरी चिन्ता मा घोडा कला प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, धेरै भन्न जो घोडाहरू खेलेको भूमिका र मलाई सेट केही बिंदु संग को प्रश्न, हामी कसरी कुराकानी रूपमा मानिसहरूलाई यी जनावरहरू । घोडा देखिन्छ एक प्रकारको दर्पण गर्न निश्चित हुन कि मानिसहरू हेर्नुहोस् को एक प्रतिबिम्ब आफ्नो आत्म कि तपाईं अन्यथा छ पहुँच.
पहिलो फोटो, तर यो धेरै व्यावहारिक छ, किन कि म महिला चाहन्थे छ जो खर्च को ठूलो भागहरु उनको जीवन संग घोडाहरू, र तिनीहरूलाई संग परिचित छ । फोटो को धेरै म संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मित, र उत्कृष्ट युवा, महिला, भेट बालिका, उदाहरणका लागि, मा बसे घोडा फिर्ता अघि, तपाईं पनि सही चलान. संग व्यवहार घोडाहरू छ संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै फरक छ एक भन्दा, म को थाह देखि मेरो घर । फिनल्याण्ड मा हामी देख्न छैन तपाईं अधिक एक शौक रूपमा, हामी तपाईं संग काम गर्नेछ.
म भर मा आयो यो प्रत्येक मामला मा, तंग मा, दुवै पक्ष को आदरणीय बीच सम्बन्ध महिलाहरु छ (र पुरुष) र घोडाहरू कि सँगै हुर्क्यो र प्रत्येक अन्य देखि सिकेका
यो साँच्चै कठिन छ राख्न भनेर शब्दहरू मा. बस्ने सेतो टट्टू तपाईं ओछ्यान मा फोटो खिंचवाने, वास्तवमा, मा महिला संग एक घर छ । हामी मिल्यो लागि तिनीहरूलाई गर्नुहोस् । यो एउटा, एक लघु घोडा थियो कि पनि एक वास्तविक बौना । अविश्वसनीय सानो छ । म थियो साँच्चै भाग्यशाली कि म संग काम थियो प्रशिक्षित घोडाहरू थिए सक्षम मा तल झूठ गर्न आदेश । निस्सन्देह, यो प्रकारको एक छ, तर: वास्तवमा, यो पनि, पप सांस्कृतिक तस्वीर ज्यादातर जवान बालिका, जो छ भने एक नजिक जडान गर्न घोडाहरू छ । किन तपाईं यो छ कि जस्तो लाग्छ त । हो, यो एक, र कहिलेकाहीं म यो पाउन लगभग आपत्तिजनक कति बीच मित्रता बालिका र घोडाहरू, एक किशोर चरण, प्रवेश पहिले तपाईं रुचि हो केटाहरू वा आफ्नो कामुकता. यो छ त धेरै अधिक जटिल छ । त्यहाँ छ यो मायालु तत्व, तर पनि काम परस्पर छ । घोडाहरू धेरै छन् सुलभ छ, तिनीहरूले तपाईं स्वीकार रूपमा तपाईं छन्, र आफ्नो शारीरिक उपस्थिति हुन सक्छ धेरै छ । अर्कोतर्फ, तपाईं पनि आवश्यक छ कि मान्छे र तपाईं गर्न जान्छ के को लागि हुन सक्छ जवान महिला प्राप्त गर्न एक तरिका आफैलाई मा एक अग्रणी स्थिति बाहिर प्रयास गर्न.
संग विशाल प्राणीहरू, सँगै काम गर्न अनुभव गर्न, सँगै कुरा हुन सक्छ कि तपाईं हेर्न को दुनिया मा एक धेरै फरक बाटो हेर्न, जस्तै, एक घोडा छ ।
← भारत कोठा च्याट निःशुल्क अनलाइन कुराहरु साइट भारत
म चाहनुहुन्छ छैन, एक गम्भीर सम्बन्ध - गम्भीर - बालिका सोध्न मान्छे →